I-Syk1224 4 UkuPrinta kweMibala yokuSika ii-Cutting ngomatshini wokuQokelela
Izinto eziphambili zombane zonke zilungelelanisa uphawu oludumileyo. Ukulawula i-PLC, isikrini sokuchukumisa esinemibala, isiguquli sokuhamba rhoqo.
Isixhobo sokuhambisa samkela i-40 Kr, i-20GrMo Ti yentsimbi ekumgangatho ophezulu eguqulweyo, kwaye emva konyango lobushushu, inako ukuya kuthi ga kwi-Six'e
Ukwamkela isakhiwo sokutsala hood, utshatise uxinzelelo oluphezulu fan enamandla. Irhasi
unikezelo kunye nolawulo lombane kwikhabhathi ukugxila ekusebenzeni okufanayo
icala lokusebenza ikhava epheleleyo ivaliwe.
Umgangatho ophezulu wentlabathi yokuphosa isanti, ubukhulu bodonga obungama-200mm
Ifayile enye ye-SF-320E (360E)
I-roller ephambili incinci: ￠ 320mm （Ngokugubungela ifluti yahlukile）, uxinzelelo lwe-roller ￠ 370mm, preheat roller ￠ 400mm.
Iimpawu zoLwakhiwo: ★ zamkele isakhiwo sokutsala, silinganisa uxinzelelo oluphezulu fan enamandla. Ukufunxa kuthe cwaka, ukuhanjiswa kwegesi kunye nekhabhathi yolawulo lombane ukugxila kwintsebenzo efanayo, kude nomamkeli akukho ngaphantsi kwe-1.5m. Icala lokusebenza livale ikhava epheleleyo. Ibhokisi yeegiya ezimeleyo, ulwakhiwo oludibeneyo lokudibanisa. Izinto roller mqengqeleki amkele 48CrMo ingxubevange sentsimbi, sangqa mqengqeleki incence engundoqo roller ...
Roller engundoqo irola mqengqeleki: ￠ 500mm （Ngokutsho imbande iyahluka）, uxinzelelo mqengqeleki ￠ 600mm, preheat mqengqeleki ￠ 600mm.
★ usebenzisa uyilo olubi loxinzelelo, ukusetyenziswa kobushushu obuphantsi, kunceda iphepha eliphambili
Ukucinezela ngokulinganayo kwaye usondele kumphezulu weroll
I-facer ephindwe kabini i-SM-E2
Umphezulu weplate eshushu ugqityiwe ngokusila, ububanzi bepleyiti ebushushu600mm, Umphathiswa opholisa iingcinga ezibandayo 5m.
Ipleyiti eshushu yenziwa yamkela ibhodi yesikhongozeli, isatifikethi seengxowa ezivaliweyo kunye nesatifikethi sokuhlola
Ubushushu beplate ngokugaya unyango, ububanzi bepleyiti eshushu
Ibhodi ye-Preheat yenziwe ngebhodi yesikhongozeli, ngokuhambelana nomgangatho wesizwe wesikhongozeli soxinzelelo, ivale isatifikethi sesikhongozeli sovavanyo kunye novavanyo lwe-ce
Ubushushu beplate ngokugaya unyango, ububanzi bepleyiti eshushu engama-600mm, itotali ye-12 yokufudumeza ipleyiti kunye nokupholisa i-4 m.
Ipleyiti yokufudumeza ngemveliso yebhodi yesikhongozeli, ngokuhambelana nelizwe
imigangatho yenqanawa yoxinzelelo yeklasi, kunye noxinzelelo lomkhumbi · · ·